60 qof oo loo maleynayo inay ku dhimatay iskuul uu Ruushku duq... | Universal Somali TV
60 qof oo loo maleynayo inay ku dhimatay iskuul uu Ruushku duqeeyay
Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin suurtagalnimada in lixdan ruux ku dhimatay weerar dhinaca cirka ah, oo diyaaradaha Ruushka ay Axaddii u gaysteen iskuul ku yaala Gobolka Luhansk ee bariga dalkaasi.
Serhiy Haidai, Gudoomiyaha Gobolka Luhansk ayaa sheegay in iskuulka oo ku yaala deegaanka Bilohorivka uu haatan gabaad u ahaa illaa sagaashan qof.
Gudoomiyaha ayaa tilmaamay in gantaalada ku dhacay dhismaha iskuulkaasi ay sababeen dab xoogan, ayna suurtagashay in la soo badbaadiyo 27 qof oo keliya, intii kalena aan nolol iyo geeri midna lagu hayn, isla-markaana ay ka baqdin qabaan in dadkaasi dhinteen, sida uu yiri.
Waxaa uu sheegay in duqayntu ay ka dambeysay, ka dib markii xoogaga wax iska caabinta ay Ciidamada Ruushka ka hor joogsadeen inay la wareegaan magaalada ugu weyn gobolkaasi ee Severodonetsk.
Gudoomiye Haidai ayaa intaasi ku daray inay weli dagaalo culus ka socdaan magaaladaasi, oo horey u ahaan jirtay magaalo warshadeed, taa oo ay ku nool yihiin boqol kun (100,000) oo qof.
Ka dib markii Moscow ay ku guuldareysatay inay qabsato Caasimadda Ukraine ee Kiev ayay diiradda saartay bariga Donbas, oo ay ku jiraan Gobolada Luhansk iyo Donetsk, halkaas oo tan iyo sanadkii 2014 ay ka dagaalamayeen xoogaga gooni-goosadka ee Ruushku taageero.
Xoogagan ayaa gacanta ku haya qaybo ka mida Donbas oo sidoo kale loo yaqaano (Donbass), Ruushka ayaana bishii February aqoonsaday Jamhuuriyadda Dadka Donetsk iyo Jamhuuriyadda Dadka Luhansk.
Kan-xigaKenya oo cabsi ka muujisay weeraro ka...
Kan-horeRuushka oo duqayn xoogan ka gaystay M...
64,700,172 unique visits